ब्लगरहरूले व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई बदल्न सक्छन्?
एकसाथ उनीहरूले समाचार उपभोक्ताहरूलाई राम्रो जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्
जब ब्लगहरू पहिले इन्टरनेटमा देखा पर्यो, त्यहाँ धेरै प्रकारका हप्पल र हप्पल थियो कि कसरी ब्लगरर्सहरूले कुनै तरिकाले पारंपरिक समाचार आउटलेटहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दछन्। आखिर, ब्लगहरू समयमा मशरूम जस्तै फैलिएको थियो, र लगभग रातभर त्यहाँ ब्ल्यागर्स अनलाइनहरू हजारौं लाग्न लागेका थिए, संसारलाई पुरानो रूपमा हेर्छन् किनकि तिनीहरूले प्रत्येक नयाँ पोस्टसँग फिट देखाए।
निस्सन्देह, हार्दिक फाइदाको साथ, हामी अब हेर्न सक्छौं कि ब्लगहरू कहिलेकाहीं समाचार संगठनहरू प्रतिस्थापन गर्न स्थितिमा थिएनन्।
तर ब्लगरहरू, कम से कम राम्रो, पेशेवर संवाददाताहरूको कामलाई पूरै गर्न सक्छ। र त्यो नागरिक जहाँ पत्रकारिता आउँछ।
तर पहिला पहिला व्यवहार गर्नुहोस् कि ब्लगहरू पारंपरिक समाचार पत्रहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्।
तिनीहरू फरक सामग्री उत्पादन गर्छन्
ब्लगहरूको साथ अखबारहरू प्रतिस्थापन गर्ने समस्या यो हो कि अधिकांश ब्लगरहरूले आफ्नै मा समाचार कथाहरू उत्पादन गर्दैनन्। बरु, तिनीहरू पहिले नै त्यहाँ समाचार कथाहरूमा टिप्पणी गर्छन् - पत्रकारहरू द्वारा उत्पादित कथाहरू। वास्तवमा, तपाईंले धेरै ब्लगहरूमा फेला पार्नु भएको धेरै पोस्टहरू आधारित छन्, र समाचार वेबसाइटहरूको आलेखमा फिर्ता लिङ्कहरू।
व्यावसायिक पत्रकारहरूले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू खडा गर्नको लागि रोजगारीको आधारमा समुदायको सडकमा हिउँदथे। स्टेरियोटोपिटिक ब्लगर भनेको हो जसले उनीहरूको पजमामा कम्प्युटरमा बस्छ, घर छोड्न कहिल्यै नदिनुहोस्। त्यो स्टेरियोटाइप सबै ब्लगरहरूको लागि उचित छैन, तर यो कुरा भनेको वास्तविक रिपोर्टर हुनु हो जुन नयाँ जानकारी खोज्न मात्र होईन, जुन त्यहाँ त्यहाँ नै उपलब्ध छ भनेर जानकारीमा टिप्पणी गर्दैन।
राय र रिपोर्टिङ बीचको भिन्नता छ
ब्लगर्सहरूको बारेमा अर्को स्टेरियोटाइप भनेको मूल रिपोर्टिङको स्थानमा हो, उनीहरूले छोटो तर दिनका समस्याहरूको बारेमा आफ्ना विचारहरू बताउँछन्। फेरि, यो स्टेरियोटाइप पुरा तरिकाले निष्पक्ष छैन, तर धेरै ब्लगरहरूले आफ्नो अधिकांश समय आफ्नो मानसिक विचारहरू साझा गर्न खर्च गर्छन्।
एक विचार व्यक्त गर्दै उद्देश्य समाचार रिपोर्टिंग गरेर धेरै फरक छ। र जब राय ठीक छ, ब्लगहरू जुन सम्पादकीयकरण भन्दा बढी भन्दा कम गर्छ, उद्देश्यले, वास्तविक जानकारीको लागि सार्वजनिक भोकालाई पूरा गर्दैन।
रिपोर्टरहरूको विशेषज्ञतामा विशाल मूल्य छ
धेरै संवाददाताहरू, विशेष गरी ती सबै भन्दा ठूलो समाचार संस्थाहरूमा, वर्षौंका लागि आफ्नो बिरालो पछ्याएका छन्। त्यसैले के यो वाशिंगटन ब्यूरो राजनीति वा एक लामो समय खेलकूद स्तम्भकारको बारेमा लिखित वाशिंगटन ब्यूरो प्रमुख हो जुन अन्तिम मस्यौदा छनौट छोडिन्छ, संभावनाहरूले उनीहरूलाई अख्तियारको रूपमा लेख्न सक्छन् किनकी उनि विषय जान्दछन्।
अब, केहि ब्लगरहरू उनीहरूको छनोट गरिएका विषयहरूमा विशेषज्ञहरू हुन्। तर धेरै अधिक शौकिया पर्यवेक्षकहरू छन् जुन अफगानिस्तानको विकासको पछि लाग्छन्। के तिनीहरू एक पत्रकारको रूपमा एकै प्रकारको ज्ञान र विशेषज्ञतासँग लेख्न सक्छन् जसको काम यो विषयको आवरण गर्न हो? सम्भव छैन।
Bloggers कसरी रिपोर्टरहरूको कार्यलाई पूरै गर्न सकिन्छ?
समाचारहरू कम पत्रकारहरू प्रयोग गरेर ल्यानन अपरेसनमा कम हुँदैछन्, तिनीहरू प्रायः ब्लगिङहरूको प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो वेबसाइटमा प्रदान गरिएको सामग्री पूरै गर्नका लागि प्रयोग गर्दै छन्।
उदाहरणका लागि, सिएटल पोस्ट-इंटिग्लिएन्सेन्जरले धेरै वर्ष पछि यसको मुद्रण प्रेस बन्द गर्यो र वेब-मात्र समाचार संगठन बन्नुभयो। तर संक्रमणमा समाचार कक्ष कर्मचारी नाटकीय रूपमा काटिएको थियो, पीआई छोडेर टाढा टाढाको पत्रकारहरु संग।
त्यसैले पीआई वेबसाइटले सिएटल क्षेत्रमा यसको कवरेज पूरै गर्न ब्लगहरू पढ्न थाले। ब्लगहरू स्थानीय निवासीहरू द्वारा उत्पादित गरिएका छन् जसले आफ्नो चुनिंदा विषय राम्रोसँग जान्दछन्।
त्यसोभए, थुप्रै पेशेवर संवाददाताहरू अब उनीहरूको अखबारको वेबसाइटहरूमा होस्ट गरिएका ब्लग चलाउँछन्। तिनीहरू यी ब्लगहरू पनि प्रयोग गर्छन्, अन्य चीजहरू बीचमा, तिनीहरूको दैनिक कडा-समाचार रिपोर्टिङ पूरै।
एक रिडरको ध्यान लिने समाचार समाचारहरू लेख्नका लागि छवटा युक्तिहरू
तपाईंले साक्षात्कारको बारेमा थाहा पाउनु सबै कुरा
"डिनर" "डिनर" हो: कन्जगेट गर्न सजिलो र सरल गर्न सजिलो
डिकोटो सिमुलेटर (तार्किक भ्रम)
लुगी गिलवानीको जीवनी
परिभाषा परिभाषा र प्रकारहरू
ESL विद्यार्थीहरूको लागि अंग्रेजी परीक्षा विकल्प
मास्टर भाषा जर्मन परीक्षा - भाग III - स्तर बी 1 CEFR
बिस्तरमा जाँदै / उठ्दै
चीनसँग संयुक्त राज्यको सम्बन्ध
Si Clause Threads - तेस्रो सशर्त: Pluperfect + विगत सशर्त
सात कार्ड घोडाश्री टैरो फैलिएको छ
लम्बर्ट - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
Mimesis परिभाषा र प्रयोग
के राजा एक त्रासदी नायक लिन्छ? क्यारेक्टर विश्लेषण
कसरी कन्जगेट गर्न "मोन्टर" (घुमाउन) फ्रांसीसीमा
लीक पत्ता लगाउने पम्पले के गर्छ?